Madaxweynihii Hore Ee FIFA Oo Ka Hadlay Suurta Galnimada In Dib Loo Dhigi Koobka Aduunka 2018 %
Madaxweynihii hore ee xiriirka kubada cagta FIFA, ninka lagu magacaabo Sepp Blatter, ayaa wuxuu qiray inay macquul tahay in dib loo dhigo koobka aduunka ee 2018, hadii ay lasoo darsadaan dalka marti gelinaya dhibaato.
Koobka aduunka oo ah dhacda ugu weyn ee kubada cagta, ayaa waxaa sanadkaan lagu qabanayaa wadanka Ruushka, iyadoona inuu bilowdo ay naga xigto ku dhawaad ama wax ka badan Labo bilood iyo Bar ama Haaf.
32 xulal ama wadamo ayaa markii ugu horeysay waxay ka qeybgalayaa Koobka aduunka, iyadoona mar sii horeysay lasii sameeyay isku aadka wareega Group-yadda ee tartankaan, diyaar garow balaaran ayna wadaan xulalka.
Mar la weydiiyay hadii Ruushka ay soo wajahaan dhibaatooyin ay ugu weyn tahay dhanka Saadka ayuu ku jawaabay: “Koobka aduunka marnaba lama joojin doono, waa uu dhici doonaa, dhamaan xulalka soo baxay waa ay dheeli doonan.
“Kubada cagtu waa mid aan xaadi ahayn, koobka aduunkana waa dhacda koowaad ee ugu weyn,” ayuu daba dhigay.
“Ku dhawaad labo Milyan oo qofood ayaa si toos ah iyo si aan toos ahayn ugu lug leh [Koobka aduunka],” ayuu raaciyay.
“Koobka aduunka bilaha ugu dambeeya ayuu dhici doonaa, waliba sida loosoo diyaariyay – Ururka kaliya ee Kansali kara ama dib udhigi kara wuxuu yahay FIFA,” ayuu ku cel-celiyay Sepp Blatter
“Marka xiriirka ma wuxuu udhaxeeyaa Ruushka iyo FIFA? Maalinta kale waa Gianni Infantino [Madaxweynaha FIFA] iyo Vladimir Putin [Madaxweynaha Dowlada Ruushka] ayaa si wada jir ah udheelaya,” ayuu hadalkiisa kusoo xiray.